Best Trading Apps များသည်မေလ ၂၀၂၁ - ဘယ်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးလဲ။
Best Trading Apps 2022 - သင့်အတွက်မည်သည့်ကုန်သွယ်ရေး App သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်း။
အွန်လိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေရာသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအဆအဆမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာအစဉ်အလာအားဖြင့်ဖုန်းအခြေပြုပွဲစားမှသင့်အိမ်ကိုသက်သောင့်သက်သာရှိရှိဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန်ခွင့်ပြုသည့်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသို့အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ အခုလား။ မိုဘိုင်းကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်များ။
ပြီးပြည့်စုံသောမိုဘိုင်းကုန်သွယ်မှုအက်ပ်ကိုပေးဆောင်သည့်အွန်လိုင်းပွဲစားကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဘဏ္ဍာရေးတူရိယာများကိုသင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ အဲဒါက စတော့ရှယ်ယာ ၊ Forex ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကုန်စည်, ညွှန်းကိန်း, သို့မဟုတ် cryptocurrencies – အပြောင်းအရွေ့တွင်ကုန်သွယ်မှုသည်ပိုမိုလွယ်ကူသည်ဘယ်တော့မှမလွယ်ကူပါ။
ဒီလိုပြောခြင်းအားဖြင့်စျေးကွက်ထဲမှာရာပေါင်းများစွာသောကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်တွေရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်မည်သည့်ပွဲစားသည်မည်သည့်အရာနှင့်အတူသွားမည်ကိုသိရှိရန်မလွယ်ကူပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရန်အကြံပြုလိုပါသည် 2022 ၏အကောင်းဆုံးထရေးဒင်း Apps က.
မှတ်စု: အကယ်၍ သင်သည် အဆင့်မြင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင် ပါဝင်ရန်ကြိုးစားနေပါက၊ သေးငယ်သော မိုဘိုင်းစခရင်ကို ဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့် desktop trading platform တွင် ၎င်းကို လုပ်ဆောင်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။.
အတိုချုပ်ပြောရရင်ကုန်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းတွေကသင့်ကိုမိုဘိုင်းပစ္စည်းတစ်ခုမှာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့်ပေးတယ်။ ထို့ကြောင့်၊ ပုံမှန်ကုန်သွယ်ရေးကွန်ရက်ရှိရနိုင်သောစွမ်းဆောင်ချက်အများစုကိုသင်၏ကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်မှတဆင့်ရယူနိုင်သည်။ ကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်များသည်သီးခြားစီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလက်ဖောင်းများမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ဤအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် app သည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့်အရစ်ကျ ၀ န်ဆောင်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ရိုးရာအွန်လိုင်းပွဲစားကိုအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သော်လည်းပွဲစားသည်၎င်း၏ desktop platform နှင့်အတူပြည့်စုံသောကုန်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းကိုလည်းကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။ ဤအရာသည်သင်တို့အားကမ္ဘာနှစ်ခုလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သငျသညျအစဉ်အမြဲပြောင်းရွှေ့အပေါ်ကုန်သွယ်မှု၏အခွင့်အလမ်းရှိလိမ့်မည်နေစဉ်, သင်နက်ရှိုင်းသောနည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါက, သင် desktop site ကိုကနေတဆင့်အများကြီးပိုကြီးတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အဓိက Desktop site တွင်တွေ့ရသည့် features အားလုံးအတူတူဖြစ်သည်
Android နှင့် iOS ကိရိယာများနှင့်သာသဟဇာတဖြစ်သည်
Trading Apps များမည်သို့အလုပ်လုပ်ကြသနည်း။
သင်ယခင်ကကုန်သွယ်မှုအက်ပလီကေးရှင်းကိုတစ်ခါမျှမသုံးဖူးပါက၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်တူညီကြောင်းသင်သိသင့်သည် အွန်လိုင်းကုန်သွယ် ပလက်ဖောင်း။ ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်သင်၏မိုဘိုင်းကုန်သွယ်ရေးအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုကိုညာဘက်ခြေထောက်ပေါ်ရောက်အောင်သင်လိုက်နာရန်လိုအပ်သည့်အဓိကအဆင့်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
အဆင့် ၁ - Mobile Trading App ကိုရွေးချယ်ပါ
သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့်သင်၏တစ် ဦး ချင်းလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောအွန်လိုင်းပွဲစားကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ အနည်းဆုံးအနေဖြင့်ပွဲစားသည်သင်၏မိုဘိုင်းစက်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်တစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းသည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည် Android နှင့် iOS လည်ပတ်မှုပုံစံများကိုပါဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်။
သို့သော်အခြားအချက်များကိုလည်းသင်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည် ရုံ မိုဘိုင်းအက်ပ်။ ၎င်းတွင် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ၊ ကုန်သွယ်မှုအခကြေးငွေများကဲ့သို့သော မက်ထရစ်များ ပါဝင်သင့်သည်၊ န့်၊ ငွေပေးချေမှု၊ နှင့် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု။
မှတ်စု: ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်တွင် မိုဘိုင်းအရောင်းအ၀ယ်အက်ပ်ကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်ကို အသေးစိတ်အပိုင်းကို ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်သုတေသနပြုလုပ်ရန် အချိန်မရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှု ၅ ခုကိုလည်း စာရင်းပြုစုထားပါသည်။
အဆင့် ၂။ App ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ
သင်၏ကုန်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးမည့်ပွဲစားတစ်ခုကိုသင်ရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်ထိုအပလီကေးရှင်းကိုသင့်ဖုန်းသို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင် app ကိုဒီပွဲစား၏အဓိက desktop ကွန်ရက်စာမျက်နှာမှတဆင့်, သို့မဟုတ် Google Play သို့မဟုတ် iTunes Store မှရှာဖွေနိုင်သည်။
သို့သော် တရား ၀ င်အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်။ သင်အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်သေချာစေလိုသည့်အတွက်ယခင်လုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။ download ပြီးသည်နှင့် application ကို install လုပ်ပြီး account ဖွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစတင်ပါ။
သင်ရွေးချယ်ထားသောအွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းဖြင့်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏အဘယ်သူသည်ပွဲစားကိုသိရန်သင့်အနေဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်အချို့ကိုထည့်ရန်အစကန ဦး တွင်သင်လိုအပ်သည်။
သင်၏အလုပ်အကိုင်အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုလည်းသင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်သင်၏နှစ်ပတ်လည်လစာနှုန်းနှင့်သင်အလုပ်လုပ်သောလုပ်ငန်းအမျိုးအစားတို့ပါ ၀ င်သည်။ သင့်အနေဖြင့်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်ကသင်ရောင်းဝယ်ခဲ့သောအမျိုးအစားနှင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ပွဲစားကိုအသိပေးရန်လည်းလိုအပ်သည်။ သင်၏ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
KYC (လူကြီးမင်း၏ဖောက်သည်ကိုသိရှိသူ) ဟုလူသိများသောဗြိတိန်ပွဲစားများအားလုံးသည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးမပြုမီသင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်လွယ်ကူသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် - အထူးသဖြင့်သင်သည်မိုဘိုင်းကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်မှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်သည်။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာအစိုးရထုတ်ပေးသော ID (ပတ်စ်ပို့သို့မဟုတ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်) ၏ဓာတ်ပုံကိုယူပြီး၎င်းအက်ပ်ကိုတင်ပါ။
ယခုအဆင့်၏အဆင့်ဆင့်အဆင့်ဆင့်တွင်သင့်အနေဖြင့်အပြည့်အဝမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုထားသောတက်ကြွသောကုန်သွယ်မှုအကောင့်တစ်ခုရှိသင့်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သငျသညျအခြို့သောရန်ပုံငွေများကိုထည့်သွင်းရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ အဆိုပါပွဲစားအပေါ် မူတည်၍ သင်သည်၎င်းကိုငွေထုတ် / ခရက်ဒစ်ကဒ်မှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပါက Google Pay သို့မဟုတ် Apple Pay သည်သင့်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေလိမ့်မည်။
တနည်းအားဖြင့် သင်သည် ဘဏ်ငွေလွှဲမှတဆင့် ရန်ပုံငွေများကို အပ်နှံရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ သို့ဆိုလျှင်၊ ရန်ပုံငွေရှင်းရန် ရက်အနည်းငယ်စောင့်ရပေမည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် သင်သည် e-wallet ကဲ့သို့သော ရန်ပုံငွေများကို အပ်နှံနိုင်ပါသည်။ PayPal က or Skrillများသောအားဖြင့် လက်ငင်းဖြစ်သည်။
သင်၏ငွေသွင်းငွေကို စီမံဆောင်ရွက်ပြီးသည်နှင့်၊ ထို့နောက် သင်၏ပထမအမှာစာကို တင်ရန် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ အရောင်းအ၀ယ်အက်ပ်အများစုသည် သင်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်လိုသော ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် ငွေကြေးတူရိယာကို ရှာဖွေနိုင်စေပါသည်။ ဥပမာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလိုလျှင် GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေကြေးအတွဲကို ရိုးရှင်းစွာရှာဖွေပြီး အရောင်းအဝယ်စာမျက်နှာသို့ တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆောင်သွားသင့်သည်။
မိုဘိုင်းအရောင်းအ ၀ ယ်အက်ပလီကေးရှင်းများသည်မည်သည့်ပစ္စည်းများပိုင်ဆိုင်သနည်း။
မိုဘိုင်းကုန်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းတွေကပွဲစားရဲ့အဓိက desktop platform မှာတွေ့ရတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအတူတူရောင်းဝယ်ခွင့်ပြုတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ငွေကြေးအတွဲ ၁၀၀ ကျော်ကိုစာရင်းပြုစုထားသောအထူး Forex ပွဲစားကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါကဤအတွဲအားလုံးသည်မိုဘိုင်း app မှတစ်ဆင့်ကုန်သွယ်ရန်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်။
ကုန်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းအများစုသည်စျေးကွက်အမျိုးမျိုးမှထောင်နှင့်ချီသောအစုရှယ်ယာများနှင့်ရှယ်ယာများကိုစာရင်းပြုစုလိမ့်မည်။ အနည်းဆုံးအားဖြင့် NASDAQ၊ နယူးယောက်စတော့အိတ်ချိန်း၊ လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းနှင့်တိုကျိုစတော့အိတ်ချိန်းစသည့်အဓိကစတော့အိတ်ချိန်းများပါဝင်သင့်သည်။
အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းရောင်းဝယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းအချို့သည်စတော့အိတ်ချိန်းကိုစျေးကွက်နည်းသောဈေးကွက်များမှအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်သြစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ စင်ကာပူနှင့်ဟောင်ကောင်တို့တွင်လဲလှယ်မှုများပါဝင်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းအများစုသည်ပြည့်စုံသော Forex ဌာနကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။ ဤသည်ကသင့်အားအဓိကအားဖြင့်၊ အရွယ်မရောက်သေးသောသူများနှင့်ထူးဆန်းသောထူးချွန်သူများထံမှငွေစက္ကူအစုအပုံများဝယ်ယူရန်နှင့်ရောင်းရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
သင်၏မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် Forex အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလုပ်နေစဉ်အထူးသဖြင့်ပုံမှန်စျေးကွက်တွင်း၏အပြင်ဘက်တွင်ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကိုသတိပြုပါ။
ပေါင်ပေါင်းထရီလီယံပေါင်းများစွာသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ခန့်မှန်းလိုလျှင်ကုန်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းအများစုသည်စျေးကွက်များစွာကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပလိမ့်မည်။ စွမ်းအင်ဌာနတွင်၎င်းတွင်အမျိုးမျိုးပါ ၀ င်သင့်သည် ဆီ စျေးကွက်များ၊
သငျသညျအဖိုးတန်သတ္တုကဏ္inတွင်လည်း - ကဲ့သို့သောစျေးကွက်အမှိုက်ပုံရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် ရှေ, ငှေနှင့်ပလက်တီနမ်။
ET️ ETF များ
အိတ်ချိန်းကုန်သွယ်ရန်ပုံငွေများ (ETFs) သည်သင့်အားအမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုအုပ်စုတစ်ခုကိုခန့်မှန်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ETF သည်သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏အမှန်တကယ်စျေးနှုန်းကိုရိုးရှင်းစွာခြေရာခံသည် နှင့် တိုတောင်းသော။
မိုဘိုင်းကုန်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းများတွင်တွေ့ရှိရသောလူကြိုက်များသော ETF စျေးကွက်များတွင် S&P 500၊ ရွှေနှင့် Russell 2000 အညွှန်းများပါဝင်သည်။
သင်ကုန်သွယ်ရန်စိတ်အားထက်သန်လျှင် စတော့ရှယ်ယာနှင့်ရှယ်ယာကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီကို ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန်လိုအပ်သည့်အတွေ့အကြုံမရှိသော်လည်းစတော့စျေးကွက်ညွှန်းကိန်းများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ဤသည်မှာရာပေါင်းများစွာသောကုမ္ပဏီများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစတော့စျေးကွက်များပေါ်တွင်သင်ထင်မြင်ယူဆသည့်နေရာဖြစ်သည်။
သင်တစ် ဦး တည်းကုန်သွယ်မှုကနေတဆင့်လုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ရာနဲ့ချီတဲ့အမှာစာတွေကိုအချိန်ဖြုန်းစရာမလိုပါဘူး။ နာမည်ကြီးစတော့စျေးကွက်ညွှန်းကိန်းများတွင် FTSE 100, NASDAQ 100 နှင့် Dow Jones တို့ပါဝင်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းများကသင် Bitcoin ကဲ့သို့သောလူကြိုက်များသော cryptocurrencies ၏အနာဂတ်စျေးနှုန်းကိုခန့်မှန်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ BTC / USD ကဲ့သို့ crypto-to-fiat အတွဲများသို့မဟုတ် BTC / ETH ကဲ့သို့ crypto-cross စုံများအားအရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သတိရပါ၊ အကယ်၍ သင်သည်ရိုးရာပွဲစားတစ် ဦး အား cryptocurrencies တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အသုံးပြုနေပါက CFD မှတစ်ဆင့်သင်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုကိုသင်ပိုင်ဆိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး၏အနာဂတ်စျေးနှုန်းကိုသာသင်မှန်းဆနေခြင်းဖြစ်သည်။
Mobile Trading App ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောမိုဘိုင်းကုန်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းကိုသင်ရှာမရသေးပါကရာနှင့်ချီသောပွဲစားများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်မည်သည့် platform နှင့်အတူသွားရန်သိရန်ခက်ခဲစေသနည်း၊ အနည်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းနှစ်ခုနှင့်အတူတူမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်မိုဘိုင်းကုန်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းအသစ်တစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ် ချ၍ တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီအောက်ပါအချက်များကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။
မှတ်စု: သင့်တွင် အောက်ပါ မက်ထရစ်များကို ဖတ်ရှုပြီး သင့်ကိုယ်ပိုင် သုတေသနကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သော အချိန်မရှိပါက၊ သင်သည် ဤကဏ္ဍကို ကျော်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြံပြုထားသော မိုဘိုင်းကုန်သွယ်မှုအက်ပ်များစာရင်းသို့ တိုက်ရိုက်သွားနိုင်ပါသည်။
ပထမ ဦး စွာနှင့်၊ အရေးကြီးဆုံးအချက်အနေနှင့်၊ သင်သည်မိုဘိုင်းရောင်းဝယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းသည်သင်၏သက်ဆိုင်ရာစက်နှင့်သဟဇာတဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည် များသောအားဖြင့်အွန်လိုင်းပွဲစားများသည် Android နှင့် iOS နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ကုန်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းကိုတီထွင်ကြလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ သင်သည် Android / iOS ရောင်စဉ်၏အပြင်ဘက်တွင်ရှိသည့်ကိရိယာတစ်ခုကိုအသုံးပြုနေပါကသင်သည်မိုဘိုင်း application မှတစ်ဆင့်ကုန်သွယ်မှုမပြုနိုင်ပေ။
သင် app သည်သင်၏ device နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိ၊ မရှိနှင့်သင်အကဲဖြတ်ပြီးပြီ။ ထို့နောက်ပွဲစား၏အထောက်အထားများကိုသင်ရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ ဤအချက်၏ရှေ့ပိုင်းတွင်ပွဲစား၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိသင့်သည်။ အကယ်၍ ပလက်ဖောင်းသည်ယူကေတွင်အခြေပြုပါက၎င်းသည်ဘဏ္theာရေးဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့မှလိုင်စင်ထုတ်ပေးရန်လိုအပ်လိမ့်မည် (FCA).
ပွဲစားသည် FCA လိုင်စင်ရှိမရှိမသေချာလျှင်ထိန်းညှိသူ၏အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ပွဲစားသည်လိုအပ်သောစည်းမျဉ်းခွင့်ပြုချက်မပါဘဲကုန်သွယ်နေသည်ဟုထင်ရလျှင်၎င်းစင်မြင့်ကိုလုံးလုံးလျားလျားရှောင်ကြဉ်ပါ။
သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းမှငွေသွင်းသောအခါမည်သို့သောရန်ပုံငွေမည်သို့လုပ်ဆောင်မည်ကိုသင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ Google Pay (သို့) Apple Pay မှဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာသင်၏ဒက်ဘစ် / အကြွေးကဒ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်အလိုအလျောက်ပေါ်လာလိမ့်မည်၊ တစ်ချိန်တည်းတွင်သင်၏အထိခိုက်မခံသောဘဏ္informationာရေးအချက်အလက်များကိုလက်ထဲသို့မရောက်စေရန်ကာကွယ်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
တနည်းအားဖြင့်ပွဲစားသည် PayPal ကဲ့သို့သော e-ပိုက်ဆံအိတ်သို့မဟုတ်ရိုးရာဘဏ်ငွေလွှဲကိုထောက်ပံ့လိမ့်မည်။ ကုန်သွယ်ရေးအပလီကေးရှင်းသည်ရန်ပုံငွေများကိုထည့်သွင်းရန်အခကြေးငွေများပေးသည်၊ မပေးသည်နှင့်အနိမ့်ဆုံးငွေလက်ကျန်များလိုအပ်မလိုအကဲဖြတ်ရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
မိုဘိုင်းကုန်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းများသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသည်။ အချို့သည် forex ကိုသာအဓိကထားကြသော်လည်းအချို့သည် Bitcoin နှင့် cryptocurrencies ကိုအထူးပြုသည် Ethereum။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, သင်ပွဲစားကမ်းလှမ်းသောပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအမျိုးအစားကိုစူးစမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ထို့အပြင်၎င်းသည်၎င်း၏ဘဏ္instrumentsာရေးတူရိယာစာရင်းမည်မျှကျယ်ပြန့်သည်ကိုလည်းအကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းသည် Forex ကိုအထောက်အကူပြုပါကကောင်းသည်။ သို့သော်အဓိကအတွဲများကိုသာထောက်ပံ့လျှင်စိတ်ပျက်မိနိုင်သည်။
မိုဘိုင်းကုန်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းအားလုံးသည်အမြတ်အစွန်းရရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ပွဲစားကသင့်အား၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်သင့်အားမည်သို့ကောက်ခံသည်ကိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွင်သင်ရည်ရွယ်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ ဤသည်မှာ '၀ ယ်ယူ' သောစျေးနှုန်းနှင့် 'ရောင်း' သောကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။
ပြန့်ပွားလေလေ၊ ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရန်စျေးကြီးလေဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းကုန်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းများသည်အလွန်တင်းကျပ်သောပြန့်ပွားမှုကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။ ထိုနည်းတူစွာပွဲစား၏ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းပုံကိုနားလည်ရန်သေချာပါစေ။ အချို့ပွဲစားများသည်ကော်မရှင်မှကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန်ကမ်းလှမ်းသော်လည်းအခြားသူများကသင်၏ကုန်သွယ်မှုပမာဏပေါ် မူတည်၍ အမျိုးမျိုးသောအခကြေးငွေပေးဆောင်ရမည်။
လက်ကိုင်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းသည်ရူပီးထောင်ပေါင်းများစွာသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရော့ခ်အောက်ခြေများ၌ကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်ထင်ရှားပေါ်လွင်နေသော်လည်းထိုအသုံးချပုံသည်အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုကိုသင်ရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ အားလုံးပြီးသွားရင်တော့သင်ဟာ standard desktop device တွေထက်အများကြီးသေးငယ်တဲ့ screen အရွယ်အစားနဲ့ရောင်းဝယ်နေလိမ့်မယ်။
၎င်းတွင်အဓိကကုန်သွယ်ရေးareaရိယာကိုယ်နှိုက်သာမကပိုင်ဆိုင်မှုမှပိုင်ဆိုင်မှုသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအပြင်သိုက်များနှင့်ထုတ်ယူခြင်းများစတင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သင့်သည်။
အချိန်နှင့်တပြေးညီသင်အကူအညီလိုအပ်သည့်အချိန်ရောက်လာနိုင်သည်။ သင်ရွေးချယ်ထားသည့်ပွဲစားကိုသင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့်အဓိကအသုံးပြုလိုပါကကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်မှတစ်ဆင့်အထောက်အပံ့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းသေချာပါစေ။ ၎င်းသည်တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်း (သို့) အီးမေးလ်ပုံစံဖြင့်လာသင့်သည်။
သင်ရွေးချယ်ထားသောပွဲစားများကိုသီးခြားလွတ်လပ်စွာသုတေသနပြုရန်အထက်ပါကဏ္ using ကိုအသုံးပြုမည်ဟုအကြံပြုသော်လည်း ၂၀၂၀ ၏ထိပ်တန်းကုန်သွယ်မှုအက်ပလီကေးရှင်း ၅ ခုကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ထောက်ခံချက်တစ်ခုစီသည်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုနယ်ပယ်၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်targetsရိယာကို ဦး တည်သည် - အစပြုသူများ၊ စတော့များအတွက်အကောင်းဆုံး app၊ Forex နှင့် Bitcoin ။
၂၀၂၀ ၏အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်များအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့လမ်းညွှန်ကိုအစအဆုံးမှအဆုံးထိဖတ်ပြီးပြီဆိုလျှင်သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည့်ပွဲစားတစ်ယောက်ကိုရှာရန်သင့်တွင်လိုအပ်သည့်ကိရိယာများရှိလာလိမ့်မည်။ ငါတို့လမ်းညွှန်တစ်လျှောက်လုံးဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်းစည်းမျဉ်း၊ အခကြေးငွေ၊ ပြန့်ပွားမှု၊ ကုန်သွယ်ရေးတူရိယာများနှင့်ဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုစသည့်ကဏ္multipleများစွာတွင်ပလက်ဖောင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။
ထိုသို့ပြောကြားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သီးခြားစီရှာဖွေရန်အချိန်မရှိသောသင်တို့အတွက်သူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းကုန်သွယ်ရေးအက်ပလီကေးရှင်း ၅ ခုကိုလည်းစာရင်းပြုစုထားသည်။ ဤသည်အသစ်စက်စက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်ကုန်သွယ် app အဖြစ် forex, စတော့ရှယ်ယာနှင့် Bitcoin များအတွက်အကောင်းဆုံး app ကိုပါဝင်သည်။
2 Capital.com - သုညကော်မရှင်များနှင့်အလွန်နိမ့်သောပျံ့နှံ့မှု
၎င်းသည် app-to-app နှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။ အကယ်၍ ပွဲစားသည်ပွဲစား / ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုလက်ခံပါကသင်သည် Google Pay သို့မဟုတ် Apple Pay မှတဆင့်ငွေသွင်းနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်ဘဏ်ငွေလွှဲသို့မဟုတ် e-wallet ဖြင့်ငွေသွင်းနိုင်သည်။
၎င်းသည်သင်အခြေပြုသည့်နေရာ၊ သင်ရောင်းလိုသောပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့်သင်လက်လီရောင်းချသောသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်သင်သည် UK ၌အခြေစိုက်သည့်လက်လီဖောက်သည်တစ် ဦး ဖြစ်ပါက EMSA မှချမှတ်ထားသောကန့်သတ်ချက်များကြောင့်သင့်အားအကျိုးပြုလိမ့်မည်။
အများစုကလုပ်တယ်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်အနည်းဆုံးပေါင် ၁၀၀ ပေါင်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်များစွာပိုမိုမြင့်မားနိုင်သည်။
မျက်မှောက်ခေတ်ခေတ်ရှိမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများနည်းတူပွဲစားများသည်သာမန်အားဖြင့် Android နှင့် iOS ထုတ်ကုန်များအတွက် developer app များဖြစ်သည်။
အချို့ပွဲစားများသည်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးအက်ပ်ပေါ်ရှိတိုက်ရိုက်ချက်တင်လုပ်ဆောင်ချက်မှတစ်ဆင့်ဖောက်သည်အထောက်အကူပြုကိုယ်စားလှယ်နှင့်စကားပြောဆိုခွင့်ပြုသည်။ တနည်းအားဖြင့်အီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ရန် (သို့) Support Center ကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်ရန်လိုသည်။
မင်းရဲ့ပွဲစားရဲ့ desktop ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေဖုန်းကိုတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ ဤနည်းဖြင့်သင်သည်တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်နေသည်ဟုသင် ၁၀၀% ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။
အကယ်၍ အဆိုပါပွဲစားသည်အဓိက desktop platform ပေါ်တွင်အပိုဆုကြေးကမ်းလှမ်းပါကကုန်သွယ်ရေး app ကိုသုံးသူများအတွက်အပိုဆုကြေးရရှိလိမ့်မည်။